China Quartz Powder Manufacturer na Supplier | Dinglong
Ngwunye quartz anyị dị ihe karịrị 99.3% crystalline ma nwee adịghị ọcha ionic na obere ikuku alpha ray. Quartz ntụ ntụ na-enye ọtụtụ ụdị ngwa anya, igwe na akụrụngwa ọkụ. A na-enweta ya ma nkesa na nkesa usoro nha ọ bụla.
Ngwa: Elektrọnik, Semiconductor, Quartz ware, Refractories
Akwa quartz dị ọcha (99.3% crystalline)
Obere ihe na-adịghị mma na obere ọkụ ọkụ
Onwu na agbanwe agbanwe nkesa oke
Dinglong quartz powders bu ntụ eji eme ihe na ngwa elektrọnik, quartz ware, refractory na ngwa ndi ozo puru iche. N'ihi ịdị ọcha dị elu nke quartz, ezigbo nkwụsi ike kemịkal ma jiri nlezianya na-achịkwa nkesa oke, ọ na-achọsi ike na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Ejiri ma tụkwasịrị obi n'ofe ụlọ ọrụ
Dinglong quartz powders bu 99.3% kristal. Na 99.3% dị ọcha, ntụ ntụ quartz ndị a nwere adịghị ọcha ionic, obere anwansị ray na kemịkal na-agbanwe agbanwe. A na-eji ntụ ntụ quartz anyị eme ihe ma tụkwasị ndị ahịa anyị obi na ụlọ na mba ofesi n'ihi na a na-ahazi usoro nrụpụta anyị maka ntụkwasị obi na nkwekọ, na-enyere aka hụ na arụmọrụ ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya na ikwughachi ya ma na-ebute ngwaahịa quartz ntụ ntụ bụ 99.3% dị ọcha. Ya mere, ndị ahịa anyị nwere ike iwulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi anyị ma dabere na ngwaahịa anyị.
Dinglong nwere ike ịmịpụta quartz ntụ na ọtụtụ nkesa dị iche iche na-ekesa site na iji ọtụtụ igwe ihe na saịtị. Ọ na-ekwe ka mgbanwe na-emepụta ihe na a sara mbara elu ugwu nke urughuru nke nkesa. Dinglong silica ntụ ntụ dị na 2200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụ ntụ ntụ silica ndị a n'ụlọ ọrụ a kwadoro na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Silica ntụ ntụ
Osote: Quartz tube
Ala Quartz ntụ ntụ
High Ọcha Quartz ntụ ntụ
Quartz ntụ ntụ maka ire ere
Ndị na-emepụta Powder Quartz
Silica Quartz ntụ ntụ